२०७६ सालमा कुन–कुन दिन हुन्छ बैंक बन्द? (सूचीसहित) - Everest Dainik - News from Nepal
२०७६ सालमा कुन–कुन दिन हुन्छ बैंक बन्द? (सूचीसहित)
काठमाडौं, चैत १८ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी वर्ष २०७६ मा बैंक तथा वित्तीय संस्था विदाका सूची सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले वर्षभरी कुनकुन दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदा पाउँछन् भन्दै सूची सार्वजनिक गरेको हो ।
केन्द्रीय बैंकले प्रकाशित गरेको सूची अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २१ दिन विदा पाउनेछन् । जसमा देशभरका बैंकल १४ दिन पूर्णकालीन विदा पाउनेछन् भने स्थानीय विदा भने छुट्टा छुट्टै समयमा हुनेछ । यो बाहेक नेपाल सरकारले घोषणा गरेको समयमा सार्वजनिक विदा हुनेछ । सूची हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्
याे पनि पढ्नुस यसरी बढ्दैछ बैंकहरुको निक्षेप लागत, कर्जा निक्षेप अनुपात र आधार व्याजदर